dgn - Peeji nke 4 - Geofumadas
Global Mapper, na-arụ ọrụ na dgn
Readinggụ usoro dgn bụ ụkpụrụ n'ọtụtụ mmemme GIS / CAD, mana ọtụtụ n'ime ndị a (n'etiti ha Manifold GIS na gvSIG) ahapụla ịgụ usoro V7. AutoCAD na ArcGIS emeela ya. Ka anyị hụ ka Global Mapper si eme ya: 1. Gụọ dgn V8 Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, faịlụ nwere ike ...
Esemokwu dị n'etiti Google Earth Pro foto na Google Earth n'efu
Enwere ọtụtụ akụkọ ifo banyere ya, site na ndị na-ekwu na ha na-ahụ onye agbata obi ha na-agba ọtọ na ndị na-ahụghị ọdịiche ọ bụla n'etiti nsụgharị ahụ. Ka anyị lee ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwu maka isi ihe a na atụ ole na ole: 1. Ee, enwere ihe dị iche na mkpebi.
Geo web Publisher, yiri mfe
N'ịtụleghachi ihe Geoweb Publisher V8i ugbu a, ọ ga-achọpụta na ngwaahịa a nwere ọtụtụ mgbanwe, ọ bụ ezie na mgbagha ahụ ka dị, enwere nnukwu mgbanwe n'etiti ihe bụ ngwa ọrụ oge ochie maka ndị injinia geo-ebipụta data ha na vector na ihe ọ bụzi atụmatụ emere maka ebumnuche ụwa. Ọ nwere ...
Bentley Systems DGN dwg My mbụ echiche
Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, mbụ echiche
eCADLite: Nhọrọ ọzọ maka Microstation
Ddị dgn kwụsiri ike, ọtụtụ mmemme GIS / CAD mara ya, mana ịdezigharị ya bụ ihe ùgwù nke Microstation n'agbanyeghị na ọ bụ naanị ụzọ atọ ka usoro a: IGDS, V7 na V8. N'ihe banyere usoro dwg, Microstation ejirila mepee ma dezie ya site na ...
Ngwaọrụ Geographics e mere na Bentley Map
Daysbọchị ole na ole gara aga, m na-agwa gị maka BentleyMap, n'oge na-adịbeghị anya, anyị na-atụle mbugharị data na ohere nke ịhazi usoro a, na nke a, anyị ga-egosi ihe atụ nke ịhazi nke ngwaọrụ Geographics anyị nwere yana nke anyị chọrọ mgbe anyị malitere ịrụ xfm. Tupu Bentley Map apụta, na ...
Mbugharị si na Geographics gaa Bentley Map
Ruo oge ụfọdụ anyị na-ekwu maka ihe ọ pụtara ịme ntopute na Microstation Geographics ruo Bentley Map, anyị ekwuola maka etu atụmatụ abụọ a siri dị na ụfọdụ uru dị mkpa nke Bentley Map. Na post m ekwuolarịrị otu ọ ga - esi kwe omume ịkwaga usoro nke ọrụ ahụ, na nke a, achọrọ m ịta esi esi akwaga maapụ nwere njirimara ...
Bentley Civil Power maka Spain
Bentley Systems Spain ekwuputala pọdkastị iji bido mbido ọrụ nke ọ kpọrọ Power Civil maka Spain, azịza maka ahịa ndị Spain na ngalaba nke injinia obodo, dịka PowerCivil maka Latin America mana yana ụkpụrụ ndị emegharịrị na Spain. Kedu ihe bụ Power Civil maka Spain PowerCivil, nwere ngwaọrụ ...
Bentley gbanwere usoro ihe omume ya kwa afọ
Ruo ọtụtụ afọ, Bentley Systems na-eme ihe omume kwa afọ nke gụnyere onyinye nke ịdị mma maka ihe ọhụrụ na mmejuputa teknụzụ na n'otu oge nzukọ site na nke akụkọ na nzukọ ọmụmụ dabere na ahụmịhe ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọkachamara ha mere ka amara. isiokwu. Afọ ole na ole gara aga gbanwere ...
Bentley Geospatial Administrator, eze mgbu
Onye nchịkwa Bentley Geospatial bụ otu n’ime ihe ndị Bentley na-enwebeghị ike ime ka ọ gbarie ma enwebeghị ọtụtụ omume nke na-akọwa mmejuputa ya na ezigbo ọrụ. Ebumnuche nke ngwá ọrụ a, nke bụ ihe mgbakwunye na Bentley Map, bụ ihe owuwu oru ngo nke emere na mbụ kemgbe ...
kml to dxf - Uzo ise ime ntughari a
Tụgharị faịlụ site na kml na dxf bụ ihe a na-ahụkarị, mgbe Google Earth ghọrọ ndị ama ama. Isiokwu a gosipụtara otu esi eji ntụgharị aka na-eme ntụgharị ahụ.
ArcView DGN dwg gvSIG oS kml kilomita iji dxf manifold GIS shp
Bentley Cadastre bụ ngwa pụrụ iche wuru na Bentley Map site na ụdị XM V8.9 na dịka aha ya si kwuo, ọ bụ maka nke ahụ; maka Cadastre. Maka ọrụ ya, ọ chọrọ Bentley Map, yana ya onwe ya yiri nha nke modulu maka nhazi ndozi cadastral. Ihe kachasị mkpa nke ngwa a bụ na ...
60 kacha elu, ọtụtụ chọrọ na Geofumadas 2008
Nke a bụ ndepụta nke okwu 60 kachasị achọ na Geofumadas afọ a 2008: 1. Akara nke ya, (1%) nke a bụ isiokwu nke nleta ndị ọzọ rutere, nke ndị maara blọọgụ na-ejikarị, Ha anaghị agụ RSS ugboro ugboro ma ọ bụ na ha nwere ya na ọkacha mmasị ha, na maka ...
ArcView blog DGN dwg ESRI Google Earth gvSIG oS kml manifold GIS My egeomates